Hikoha-maina aza atao… | NewsMada
Hikoha-maina aza atao…
Par Taratra sur 13/11/2017
Efa mivoaka any amin’ny fampahalalam-baovao sy ny tambajotram-pifandraisana sosialy any fa hisy lanonambe hatao eny amin’ny Coliséum Antsonjombe eny, ny alarobia izao. Rahafakampitso izany. Lanonambe hizaran’ny filoham-pirenena mivady «kits scolaires » ho an’ny mpianatra eto Antananarivo izy izany ary hohafanain’ny mpanakanto malaza.
« Ny filoham-pirenena mivady, manampy ny mpianatra sy ny ray aman-dreny ». Izany no re miverimberina ao anatin’ilay antso.
Maninona izao raha ankinina amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena fotsiny ny fizarana izany ? Fa azo atao koa ny manaparitaka avy hatrany ireo “kits scolaires” ireo amin’ireo fari-piadidiam-pampianarana (Cisco). Ry zareo indray avy eo no tokony hizara azy eny amin’ny Zap, isaky ny distrika. Dia izay, vita kabary ! Fa maninona no tsy maintsy hanaovana lanonambe tahaka izao ? Fa ahoana koa no izao vao hozaraina izany fa tsy tamin’ny fidirana ofisialin’ny taom-pianarana ?
Fanontaniana ihany izany ka hapetraka fa efa mazava re rey olona ny antony a! Fotoan’ny fisehosehoana izao. Fisehosehoan’ny fitondrana… HVM hakana ny fon’ny vahoaka. Hilazana fa “reko ny fitarainanareo, hitako, tsapako ny fahasahirananareo”. Katsaka, tsaramaso, voanjobory… Hikoha-maina tokoa aza atao, mainka fa hisy… “kits scolaires” hozaraina.
Fotoana mety tsara koa io hanarenan’ny fitondrana ireo tsikera sy fanakianana maro niantefa taminy, taorian’ireny savorovoro nampisahotaka teto an-dRenivohitra, ny herinandro lasa teo, ireny.
Manavanana ity fitondrana ity io fanararaotana hisehosehoana io. Hainy tsara. Efa nanomboka izany tamin’ny fitokantokanana zava-bita. Ary aza gaga fa mbola hitohy, hitohy hatrany isaky ny misy irika. Efa nisy, ohatra, ny fitokanana toby famokarana herinaratra, fitokanana trano fiangonana. Mety hisy koa aza ny fitokanana lalankely, paompin-drano,… lavapiringa, sns. Izay ilay paipaika… paipaika politika. Takatra, hita ihany na atao aza hoe donton’ny fahasahiranana ny vahoaka. Hikoha-maina aza atao !